Usuku: 2 Okthoba 2019
I-Kocaeli Protocol ku-Pedestrian Safety Watch
I-2019 imenyezelwe ngokuthi 'unyaka Wokuhamba Okuhamba Kokubaluleke Kakhulu' nguMnyango Wezangaphakathi. Ngenkathi izinhlawulo zethrafikhi zalabo abangazinikeli phambili kubantu abahamba ngezinyawo zandiswa yi-100, i-Kocaeli Governance, iDirectorate Security yaseKocaeli, iKocaeli Provincial Gendarmerie Command noMasipala waseKocaeli Metropolitan. [Okuningi ...]
Izindaba ezimnandi ze-ski resort ye-Izmir
Ungqongqoshe Wezolimo Namahlathi Bekir Pakdemirli, Bozdag Ski Center uyahlolwa. I-Pakdemirli, "ngonyaka owedlule ngenxa yengozi ye-avalanche izosebenza ngesizini ezayo yasebusika ivaliwe," kusho yena. I-Odemis ingesinye sezindawo zokuphumula ezibaluleke kakhulu e-Skigean esifundeni sase-Aegean. [Okuningi ...]
I-50 Inciphisa Izindleko Zokukhiqiza kuNgqungquthela Yezimali Zamarobhothi
Ukuqala Kwezimali ZamaRobhothi Nezimboni 4.0 sekuqalile. I-3 izoqhubeka kuze kube uLwesine kusihlwa ka-Okthoba. Ukutshalwa kwemali kubuchwepheshe obusha akuhlali kudinga amabhajethi aphezulu nezikhathi eziguqukayo. siqu [Okuningi ...]
Indawo Yokuvikela Yezokuvikela Kumelwe Isungulwe e-Ankara
Ingqungquthela Yezokuvikelwa Kwezempi Emazweni Omhlaba kanye neNgqungquthela Yezokuphepha Emngceleni - i-MRBS yavula ngokubamba iqhaza kukaNgqongqoshe Wezangaphakathi uSüleyman Soylu kanye noNgqongqoshe Wezokuvikela kuzwelonke uHulusi Akar. Ekuvuleni kwengqungquthela, isivumelwano sokusebenzisana ngokubambisana ngaphakathi kwezinga lomsebenzi wezasekhaya nowokwenza ubuzwe nguMnyango Wezokuvikela Kazwelonke [Okuningi ...]
Karşıyaka Isimo Samuva ku-Çiğli Tram Project
Yathulwa ngo-Ephreli Karşıyaka Iphrojekthi, eyayilungiselelwe ukuqhubekisela phambili itramu kuhola we-Çiğli, ivunyelwe yi-İzmir Governorship futhi inqubo ye-EIA yaqalwa. Umasipala we-Izmir Metropolitan, ngesicelo sezakhamizi ukuthi zandise umkhombandlela wethilamu ugoqe imikhono. iphrojekthi [Okuningi ...]
Ukuthunyelwa Kwemboni Yezokuvikela eKardemir
Ithimba elivela kwiHhovisi likaMongameli Wezokuvikela, i-Karabük Iron kanye neNsimbi Enterprise (KARDEMIR) AS. I-KARDEMİR AŞ isingathe ithimba elivela kuHhovisi LikaMongameli Wezokuvikela. Ukukhiqizwa kanye nokutshalwa kwemali kwe-KARDEMİR embonini yezokuvikela namuhla [Okuningi ...]
IHaydarpaşa Solidarity: 'iHaydarpaşa neSirkeci Sitimela Sokudlulisela ku-IMM'
Isikhungo saseHaydarpaşa Solidarity Haydarpaşa naseSirkeci Isitimela ukuze kudluliselwe uMasipala wase-Istanbul Metropolitan senze isitatimende esibhaliwe. incazelo; “Sicela ukuthi kudluliselwe esiteshini saseHaydarpaşa naseSirkeci siye kuMasipala wase-Istanbul Metropolitan uma nje besetshenziselwa izinhloso zabo zokuqala nezomphakathi! Haydarpasa [Okuningi ...]
Isikhumulo sezindiza i-Esenboğa Subway 1 Sizobiza amaRandi Ayizigidigidi
Isikhumulo sezindiza i-Esenboğa Subway 1 Sizobiza amaDola ama-Bilion Dollars: IMeya kaMasipala wase-Ankara Metropolitan uMansur Yavaş ubambe iqhaza ohlelweni lwe-Alt One ku-One Private ”kaFatih Altaylı ku-Habertürk TV. Echaza ngemisebenzi yansuku zonke ye-200 ekusakazweni bukhoma, iMeya uJavaş iveze namaphrojekthi wayo eBaşkent. [Okuningi ...]
Isicelo seKhadi leManyisa sivuselelwe
UMANULAŞ, ongaphansi koMasipala waseMetropolitan, umemezele ukuthi isicelo seManisakart sibuyekeziwe eSitolo se-Apple. Isicelo seManyisa Card, esiza izakhamizi ukuthi zikwazi ukuthola imininingwane eziyidingayo mayelana nolayini bamabhasi ngaphakathi kwemingcele kaMasipala iManisa Metropolitan eSitolo se-App [Okuningi ...]
Ukuhamba Komphakathi Ngamakhadi we-Elkart Identity Cards 3 Day Free
Umasipala waseKonya Metropolitan unikeza abafundi ithuba lokusebenzisa amakhadi abo omazisi njenge-Elkart kwezokuhamba zomphakathi nokuhlomula ezimotweni zokuhamba zomphakathi ze3 mahhala kusuka ekusetshenzisweni kokuqala. Umasipala waseKonya Metropolitan; IYunivesithi yaseSelçuk, eNecmettin [Okuningi ...]
Salim Dervişoğlu ukwakha isiteshi seselula sesibili
Kwakhiwa imigwaqo engomahambanendlwana eSalim Dervişoğlu Street, okuyindlela eya eD-100 onguthelawayeka, esetshenziswa ukuthutha umphakathi ukuya ezigodini zaseKocaeli's Karamürsel, Gölcük naseBaşiskele. Esokuqala esakhelwe indlu yomphakathi [Okuningi ...]
imikhumbi eTurkey omncane ezokuthutha Kocaeli Metropolitan Municipality ulaşımpark ezingaphansi kwayo, inani 12 ezifundeni ezahlukene Kocaeli University (COD) 'Yini engenza inkonzo yezokuthutha. UMasipala Metropolitan uhlinzeka ngezinsizakalo zokuhamba eKocaeli nge-336 ngebhasi elinemvelo. Metropolitan, 2019-2020 ngesikhathi semfundo [Okuningi ...]
Ukudilizwa kwezindawo ezisetshenziswe ezitezi ezingezansi kwesikhungo i-Esenler Bus Station, esathathwa yi-IMM, kwaqedwa. UMasipala we-Istanbul Metropolitan (IMM), i-9 yathatha izintambo ngoSepthemba 15 Julayi Democracy Bus Station (Esenler) ihlanza izindawo ezinganakwa, nezinezinkinga. Inhloso yamaphansi phansi esiteshini sebhasi [Okuningi ...]
I-IMM Ixoliselwe iMetrobus futhi Yazisa Isixazululo
UMasipala wase-Istanbul Metropolitan wenze isixoliso ngenxa yokuqina kakhulu kwesitobha se-Altunizade metrobus ekuseni. Ukuze enze ngcono lesi simo, uSöğütlüçeşme wathi kuyo yonke iMetro [Okuningi ...]
I-IETT yokuxhasa iphrojekthi ye-ITU's Driverless Vehicle Project
I-IETT General Directorate izokweseka iphrojekthi yezimoto ezingashayeli i-Istanbul Technical University ehlela ukuyithuthukisa kanye nababambiqhaza bamazwe omhlaba. I-IETT General Directorate, enye yezinhlangano ezixhumene noMasipala wase-Istanbul Metropolitan (i-IMM), ingumthombo ozwela imvelo, futhi owenziwe ngenye indlela owenza impilo yasemadolobheni ibe lula. [Okuningi ...]
Ukuqeqeshwa kwabafundi ngokuhamba ngebhayisikile
Umasipala wedolobha laseKahramanmaraş uhlinzeke ngoqeqesho lwamabhayisekili kubafundi base-Erkenez ukuze kuthuthukiswe ukusetshenziswa kwamabhayisekili ezokuhamba emadolobheni. Izingane zaze zaya esikoleni nothisha bazo. I-23-27 Septhemba ngaphakathi kwesibalo somkhankaso we 'Let Go to School by Izingane' owethulwe yi-Healthy Cities Association [Okuningi ...]
U-Bozöyük Uzamile Ukumangalelwa Ngecala Lokulimala Kwezitimela
Esikhathini 2009 Bozoyuk dengwane kule ngozi isitimela ababhubha abagibeli ezinhlanu futhi umthwalo wabo ngoba ethi-Republic of Turkey State Railways (TCDD) ukuthi uboshwe ngemuva abasebenzi ababili ugunyaziwe 10 iminyaka. Icala eliqhubekayo ngaphambi kweNkantolo yokuXinisa yaseBozüyük, i-TCDD [Okuningi ...]
RayHaber I-02.10.2019 Tender Bulletin
Ukufakwa kweHanlı-Çetinkaya Electrification Plants Landslide Improvement Work phakathi kweDurak Bucak Izikhungo ezifanayo Zesitimela Nezinye Izindaba Ungase Ube Nentshisekelo.RayHaber I-25.01.2019 Tender Bulletin 25 / 01 / 2019 Akunamarekhodi ethenda we-25.01.2019 kusistimu yethu.RayHaber 04.02.2019 [Okuningi ...]
Inani le-Ankarakart elisetshenziswe kuzo zonke izimoto zokuhamba zomphakathi enhlokodolobha selidlulele kwizigidi zama-6. Encwadini ye-2020-2024 Strategic Plan ye-EGO General Directorate, inani le-Ankarakart ngokwezinhlobo zabo nalo lifakiwe. Ngokwemininingwane evela ku-EGO, i-30 ngoJuni isiyonke isibalo se-6 sezigidi e-Ankara [Okuningi ...]
UMbusi WesiFunda Sırmalı Uphenyo ku-Edremit Çanakkale Highway
U-Edremit Çanakkale D550-06 Ukuze avimbele amathole womgwaqo aqubuke emgwaqweni, umhlangano wabanjwa ngaphansi kongqongqoshe we-Edremit Governor Ali Sırmalı. Ukuze uqinisekise ukuthi ukuhamba kwezimoto esifundeni sethu kuhamba kahle futhi kuphephile, uMbusi WesiFunda u-Edremit Ali [Okuningi ...]